Vaovao - Ny paoketra fihadianay dia manome antoka ny kalitao sy ny faharetany
XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTD. miorina ao an-tanàna malaza indrindra Xuzhou milina fananganana. Amin'ny maha-mpanondrana matihanina amin'ny asa fanorenana sy kojakoja fanamoriana, Minyan dia manana traikefa ara-barotra mandritra ny taona maro ho an'ny milina fananganana any Shina, manana traikefa sy loharano be dia be izahay ho an'ny varotra mialoha, fivarotana ary aorian'ny fivarotana, ary nankatoavin'ny governemanta China izahay, ny filozofian'ny orinasanay dia "Crédibility, Integrity, Perfection" - teny CIP.
Sehatra fandraharahana: naondrana amin'ny firenena 80 ny vokatray; ahitàna an'i Aostralia, Amerikanina, Angletera, Polonina, Rosia, India, Firenena lehibe atsy Afrika, Azia Afovoany, Azia atsimo atsinanana sns.
1. Ny orinasan-tsika indrindra dia manao EXCAVATOR ROCK BUCKET, EXCAVATOR EARTHMOVING BUCKET, EXCAVATOR SIEVE BUCKET, BUCKET TEETH, EXCAVATOR RIPPER, EXCAVATOR QUICK COUPLER, ny vokatray dia mety amin'ny karazana maodely excavator rehetra. Toy ny CAT, XCMG, KOMATSU, BOBCAT, SHANTUI, HYUNDAI…
2. Ny orinasanay koa dia manondrana milina ambany
(1) Crane automatique feno hydraulic, ny lanjan'ny fibatana avo indrindra hatramin'ny 8 taonina ka hatramin'ny 160 taonina.
(2) Hydraulika feno tanteraka ny crane auto terrain, ny lanjan'ny fibatana avo indrindra hatramin'ny 25 taonina ka hatramin'ny 1200 taonina.
(3) crane crawler, ny lanjan'ny fampiakarana max 35 taonina 2000 taonina
(4) Tower crane (jib marindrano; jib azo ovaina), ny fampiakarana max avy amin'ny 4 ka hatramin'ny 50ton. Ny maodely rehetra dia afaka mahatsapa ny fijanonana, ny fiaran-dalamby, ny fitsangatsanganana ary ny fametahana azy ho an'ny filanao fananganana.
3. Roller amin'ny lalana, lanja hatramin'ny 0,8 taonina ka hatramin'ny 30ton. Ao anatin'izany ny amponga roa, roller vibratory lalana, amponga tokana ary familiana arabe vibratory, familiana arabe pnemika.
4. Aspalt & beton paver, miasa ny sakany manomboka amin'ny 2.0m ka hatramin'ny 14m.
5. Loaderan'ny kodiarana, fahafahan'ny siny manomboka amin'ny 1 taonina ka hatramin'ny 12 taonina. Volavola vita amin'ny 0,5 cbm ka hatramin'ny 6.5cbm
6. Bulldozer manomboka amin'ny 80hp ka hatramin'ny 520hp
7. Crawler Excavator sy volavolan-tsolika excavator kodiarana avy amin'ny 0,044cbm ka hatramin'ny 6cbm. Ny lanjan'ny asa amin'ny 1.64t ka hatramin'ny 90t
8. Motor Grader manomboka amin'ny 102hp ka hatramin'ny 535 hp.
9. Fitaovana simenitra toy ny mixer an'ny kamio avy amin'ny 6cbm ka hatramin'ny 14cbm, paompy konkritika manomboka amin'ny boom 37m ka hatramin'ny 56